Fiteny javaney - Wikipedia
Isan'ny mpiteny 80 tapitrisa
Faritany Indonezia ary Endrika:Surinam
Sata Tsy manana sata ofisialy
Soratra latina, na abogida javaney
Ny fiteny javaney dia fiteny any amin'ny nosy Java, any Indonezia. Misy olona 80 tapitrisa, eto an-tany no miteny Javaney, ary tenin-dren'ny olona 75 tapitrisa izy any Indonezia. Eo aian'ny fiteny Indonezianina, izy no teny be mpiteny indrindra any Indonezia.
Ny fiteny Javaney dia voasintona avy amin'ny teny Aostrônezianina, ary mitovy fianakavina amin'ny fiteny malay ny fiteny Javaney. Miteny Indonezianina ny mponina Javaney rehefa mivarotra na rehefa miresaka amin'ny Indonezianina tsy mahay miteny Javaney.
Any ivelan'i Indonezia, betsaka ny olona miteny Javaney, indrindra any Azia eo amanodidin'ny Indonezia : Any timaoro Atsinanana, any Malaizia, any Singapaoro ary any Aostralia ; misy koa any Hong Kong sy any Taiwan. Vitsivitsy izy any Surinam.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_javaney&oldid=640505"
Voaova farany tamin'ny 8 Aogositra 2013 amin'ny 14:08 ity pejy ity.